Uyenza njani isiphumo se-watercolor kwi-Photoshop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uyenza njani isiphumo se-watercolor kwi-Photoshop
I-Photoshop sisixhobo esihle sokuhlela iifoto zakho kwaye ubanike ubugcisa bobugcisa. Kule posi Ndiza kukufundisa inyathelo ngenyathelo ukuba wenze njani isiphumo se-watercolor kwi-Photoshop. Ilula kakhulu kwaye, nangona isebenza kakuhle ngemizobo, ungayifaka kulo naluphi na uhlobo lwesithombe ukuyinika ubuchule bokubumba Uvavanye!
1 Yenza i-canvas kwi-Photoshop
2 Lungisa ifoto yakho ukuyiguqula ibe ngumbala wamanzi
3 Faka isicelo sokucoca ubugcisa kumaleko 1
4 Yenza iiseti ezimbini zohlengahlengiso kwaye uzongeze kumaleko 1
5 Yenza imaski entsha yomaleko kumaleko 1 kwaye uzobe
6 Faka umbala kwi-watercolor yakho kwi-Photoshop
Yenza i-canvas kwi-Photoshop
Masiqale ngokwenza i-canvas apho siza kulinganisa i-watercolor yethu. Cofa kwi "Ifayile> entsha" okanye kwiscreen sasekhaya cofa kwiqhosha "yenza elitsha". Siza kukhetha uxwebhu lwe-pixel ye-1000 x 1000, imowudi yombala we-RGB.
Nje ukuba unayo uye kwi ithebhu "yokuhluza" kwimenyu ephezulu, kwaye ucofe ku "Igalari yokuhluza". Iwindow entsha iya kuvula apho uza kufumana iifilitha ezahlukeneyo ezicwangciswe kwiifolda. Yiya kwifayile ye- ifolda "texture" kwaye ukhethe "ukuthungwa". Kwiphaneli elungileyo, siya kuqwalasela:
Umgangatho ukuya kuma-64%
Ukukhanya osezantsi ngasekunene
Xa unayo, hit "ok" kwaye uzakulungela i-canvas yakho.
Lungisa ifoto yakho ukuyiguqula ibe ngumbala wamanzi
Vula umfanekiso ofuna ukuyiguqula ibe luxwebhu olwahlukileyo. Siya ku susa imvelaphi. Sebenzisa i khetha isixhobo sesifundo ukukhetha intombazana. Xa unayo, yenza imaski yomaleko ngokunqakraza kwisimboli eboniswe kumfanekiso ongentla.
Ukuba ukhetho alufezekanga, ungakhathazeki, kunye nefuthe le-watercolor ayiyi kubonakala kakhulu. Nangona ufuna, ngebrashi emnyama nemhlophe, unokupeyinta ngaphezulu kwesigqumathelo sokulungisa ezo ziphene. Faka isicelo semaski. Xa unayo rhuqa intombazana uye kuxwebhu olukwibala. Chwetheza command + T (Mac) okanye ctrl + T (Windows), ukuyihamba kwaye uyilinganise, ke uya kuyiphumeza ukuze ivumelane nendawo esiyilungisileyo.
Faka isicelo sokucoca ubugcisa kumaleko 1
Kwinqanaba loku-1 siya kusebenzisa icebo lokucoca ulwelo. Yiya kwithebhu "Icebo lokucoca ulwelo"> "igalari yokuhluza", kwiwindow entsha, vula ifolda "yobugcisa" kwaye ucofe ku "umbala oxutywe". Emva koko, kwiphaneli esekunene, siya kuqwalasela:
Iinkcukacha zebrashi 14
Ubunzulu besithunzi 0
Xa unayo betha "kulungile".
Yenza iiseti ezimbini zohlengahlengiso kwaye uzongeze kumaleko 1
Siya ku yenza umaleko omtsha wolungelelwanisoUkwenza uhlengahlengiso lomaleko kufuneka ucofe uphawu oluvela kumfanekiso ongentla. Kule meko, Siza kucofa i-hue / saturation. Ukwenza useto lusebenze kuphela kwikepusi engezantsi, Layer 1, chwetheza umyalelo + ukhetho + G (Mac) okanye ulawulo + alt + G (Windows). Ngoku, yehlisa ukuzalisa ukuya kwi-100. Yenza ifayile ye- uhlengahlengiso olutsha, ngeli xesha "ukukhanya / umahluko" kwaye uyisebenzise kuphela kumaleko 1. Nyusa ukukhanya ukuya kwelona liphezulu.
Yenza imaski entsha yomaleko kumaleko 1 kwaye uzobe
Xa ufika kweli nqanaba uya kuba nayo yonke into ekulungele ukuqala ukudala i-watercolor yakho. Yenza ifayile isigqumathelo esitsha somaleko womaleko 1 Kwaye, ngebrashi emnyama, uza kuyipeyinta, kodwa awuyi kusebenzisa naluphi na uhlobo lwebrashi!
Yiya kwifestile, iibrashi. Iphaneli entsha iya kuvulwa. Ngaphantsi koseto lwebrashi, uya kufumana uninzi lweebhulashi zesitayile sobugcisa onokuyenza kwaye iya kukunceda ulingise ukubetha kwepeyinti kunye namabala. Dlala ngobungakanani, ukungacacanga, imilo, kunye nendawo eyahlukeneyo.
Faka umbala kwi-watercolor yakho kwi-Photoshop
Xa unefoto nomnyama uthambile, imiphetho ithe mfiliba kwaye ineentlobo ezahlukeneyo ze- "stroke" ngakumbi okanye ezingabonakaliyo. Faka umbala. Sebenzisa iibrashi ezifanayo kunye nobuchwephesha obufanayo, kuphela ngeli xesha endaweni emnyama uya kusebenzisa imibala kwaye endaweni yokupeyinta kwimaski yomaleko uya kupenda kumaleko omtsha esiza kuwenza kwaye siwubeke ngaphezulu.
Ukwenza umaleko, cofa kwisimboli eboniswe kumfanekiso ongentla. Unokukhetha umbala wombala owuthandayo kwesi siphumo, ndincoma ukuba uzame imibala ye-pastel.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Uyenza njani isiphumo se-watercolor kwi-Photoshop